Moto Z4, ndị a ga-abụ ihe eji eme ya na njirimara teknụzụ | Gam akporosis
Moto Z4, ekpughere nkọwa izizi
N'ime ekwentị niile a na-atụ anya ịhapụ n'afọ 2019, bụ nke ọhụrụ Moto Z4, nke n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe kachasị mma na amaala dum, na-aga n'ihu na-apụta n'ihi eziokwu ahụ bụ na o nwere Moto Mods, mmewere nke mere ka ọ dị iche na smartphones sitere na ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Mgbe moto moto z3 ndakpọ olileanya mgbe ọ rutere ahịa na Snapdragon 835 processor, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a tụrụ anya na ọ ga-aga ahịa na nke ọhụrụ Qualcomm SoC dị, nke bụ Snapdragon 845. Agbanyeghị, ọ dị ka na Moto Z4 ọhụrụ ọ ga-abịa na vitamin na okpueze Qualcomm: dị ike Snapdragon 8150, ma ọ bụ Snapdragon 855, nke ga-enye ụfọdụ amara ọhụrụ ama site na akara ngosi Chicago.
More nkọwa nke Moto Z4
Site na ihe anyị maara ruo ugbu a gbasara ngwaọrụ ọhụrụ a, bụ site na ịnwe Snapdragon 8150 SoC ọ ga-abanye n'elu ekwentị kacha mma nke 2019, yana ọ nwekwara aha koodu Motorola Odin.
Tinyere ihe ndị ọzọ, anyị maara na nke ọhụrụ moto moto z4 Ọ ga-enwe 4GB RAM, yana 32GB nchekwa a na-atụ anya ya, nke nwere ike bụrụ nsogbu nye ọtụtụ ndị ọrụ nwere nnukwu ọchịchọ, yana ndị ọzọ ya na nnukwu asọmpi nke akara America nwere.
Anyị amaghị ma ọ ga - enwe oghere kaadi micro SD, n'ihi na iji nchekwa dị mma ọ ga - abụ ihe dị mkpa. Dị ka sistemụ arụmọrụ ọ ga-enwe A gam akporo 9 achịcha, ma ọ ga-enwekwa Moto Mods ndị amaworị ama ama na ụdị ndị gara aga.
Na mgbakwunye, ụfọdụ asịrị na-agwa anyị na mwepụta nke ọhụụ ọhụrụ Moto Z4 ga-aga aka na nke ọhụrụ Ụgbọ ala Mod 5G dị ka mgbakwunye maka ekwentị. Ọ bụ ezie na anyị maara ụfọdụ njirimara site na XDA chiso, bụ ezigbo ihe ọmụma sitere na ozi, anyị amaghị nke ọma na njirimara ndị a ziri ezi. N'agbanyeghị nke a, anyị nwere ike ịnwe ndidi ma chere maka akara ndị America iji kwupụta ụbọchị mwepụta iji mata njirimara nke ekwentị a na-atụ anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto Z4, ekpughere nkọwa izizi
Akpa mbu nke Meizu 16S na-agbapu na ntanetị: igwefoto azụ atọ na enweghị ọkwa ma ọ bụ bezels bụ ihe na-abịa
Google Pixel ga-echekwa ederede nke oku azịza ya na AI